TRF ee Saxaafadda 2018 Abaabulka Abaalmarinta, Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn TRF ee Saxaafadda 2019
Saxafiyiintu waxay ogaadeen Hay'ada Reward Foundation waxayna ku faafinayaan ereyga ku saabsan shaqadeena oo ay ka mid yihiin: casharadeena ku saabsan halista ka timaadda sigaar-cabista muddada-dheer; ku baaqida wax ku ool ah, barashada galmada ee maskaxda ku haysa iskuullada oo dhan; ubaahantahay tababarida bixiyeyaasha xanaanada caafimaadka NHS ee ku saabsan qabatinka sawirada qaawan iyo waxqabadkeena cilmi ku saabsan dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada iyo khalkhalka dabeecadaha galmada ee qasabka ah. Boggan wuxuu diiwaangeliyaa muuqaalkeenna wargeysyada iyo khadka tooska ah. Waxaan rajeyneynaa in aan soo dhejino sheekooyin badan oo dheeraad ah sida 2019 ay u socoto.
Haddii aad aragto sheeko muujinaysa TRF oo aanan ku dhejin, fadlan noo soo dir warqad ku saabsan adoo isticmaalaya foomka xiriirka ee ku yaal bogga hoose.
Muuqaalka Nolosha iyo Dhaqanka, oo uu qoray Roisin Agnew. Waxaa lagu daabacay khadka tooska ah 9ka Diseembar 2019
Kicitaanka qatarta leh ee 'difaaca galmada' iyo waxa ay haweenka uga dhigantahay
Grace Millane, India Chipchase, Natalie Connolly: sheekooyinka galmada gaarka ah ee dumarka ayaa loo adeegsadaa ka dhanka ah, xitaa geeri
Rabshadaha galmada ee loo geysto dumarka ayaa ku sii kordhaya Boqortooyada Midowday (UK) siyaabo naxdin leh iyo siyaabo aan loo fahmin. Waxay ku fidsan tahay adeegsiga taariikhda taariikh nololeed ee galmada ee dumarka inta lagu gudajiray xukunkooda dilka ilaa faafinta iyo si xun u isticmaalka ficillada BDSM, oo badanaa lagu eedeeyo faquuqnimada galmada. Waxa wali caddayn waa waxa sababay mowjaddan cusub ee rabshadaha jinsiga ah, iyo sida ay haweenka iskood uga raalli ahaadaan iyo kaqeybgalka noocyada galmada ay ula hadlayaan dhibaato ballaaran oo ku saabsan galmada maanta.
The dil loo geystey boorso gadaal u ah oo 21 sano jir ah oo reer Britain ah Grace Millane iyo tijaabada muuqaalka sare ee lasocota ayaa dhalisay walaac qoto dheer, taasoo muujineysa sida sheekooyinka galmada gaarka loo leeyahay ee dumarka loo istcimaali karo iyaga oo qayb ka ah difaaca 'galmada xun'.
Maalintii koowaad ee dhalashadeeda 22aad, Millane - oo gadaal ka riixeysay New Zealand - waxay maalin la yeelatay nin ay kula kulantay Tinder. Ka dib markii ay habeen maqnaayeen, labadooduba waxay ku noqdeen gurigiisii ​​halkaas oo uu ku sii waday sidii ay iyada ugu kicin lahayd galmada inta lagu guda jiro galmada. In kasta oo xeerbeegtida ay xukun dil ah ku xukuntay bishii hore, haddana tijaabada ayaa lafteedu cadho ka muujisay sida ay nolosheeda galmada u soo bandhigtay iyada oo ah caddaymo ka dhan ah iyada. Kaqeyb galkeedii hore ee BDSM iyo adeegsiga barnaamijyada shukaansiga ee shukaansiga sida Whiplr waxaa loo adeegsaday cadeyn muujineysa inay ku raaxeysatey noocyo ka mid ah dhaqamada, taasoo muujineysa in tani ay ahayd kiis 'ciyaaraha galmada si xun ayey u dhacday'. Mid ka mid ah saaxiibadeedii hore ayaa xitaa loogu yeeray isuduwaha difaaca si ay ugu marqaati kacdo in Grace ay ku hawlan tahay xanaaneynta galmada.
Guud ahaan Boqortooyada Ingiriiska tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray a Boqolkiiba 90 ayaa kordhay difaaca 'galmada xun', iyo shantii sano ee la soo dhaafay waxaa lagu guuleystey ku dhawaad ​​kalabar kiisaska. Waxaa ka argagaxay isbeddelka soo socda, actorka Fiona McKenzie ayaa la aasaasay Kama Ogolaan karno Tan, koox olole oo ka shaqeynaya inay yeeshaan 'jinsi xumeyn' ama waxa loogu yeero '50 SawiroDifaaca ayaa laga tuuray maxkamadaha Ingiriiska. Iyada oo ay weheliso xildhibaanka shaqaalaha Harriet Harman, kooxdu waxay isku dayeysaa inay kudarto qodobka Sharciga Ku-xadgudubka Guryaha Taasi waxay ka dhigaysaa sharci darro in nin dilay naag inay sheegato inay ogolaatay rabshadaha keenay dilkeeda. Ololeeyeyaasha ayaa ku doodaya in oggolaanshaha cayaaraha galmada qaarkood uusan la mid ahayn oggolaanshaha in la dilo, sida ay muujisay kiiska Millane. Difaaca 'galmada qallafsan' wuxuu sidoo kale ku dhiirrigelinayaa dhibanayaasha xadgudubka galmada inay u soo baxaan, iyagoo ka baqaya in noloshooda galmo loo adeegsado inay ceebeeyaan ama eedeeyaan - wax aad uga sii baahnaa nidaamka maxkamadda.
“Badanaa, kama heli doontid wax ku saabsan qofka u dhintey magacooda iyo eedahaas xun ee loo soo jeediyay” - Fiona McKenzie, Ma Aqbali karno Ololahaan
McKenzie ayaa yidhi: "Tani waxay umuuqataa gebi ahaanba dhaqan soo jireenka ah oo lab ah oo lagula kaco dumarka taas oo umuuqata inay si buuxda ula jaan qaadayaan tacaddiyada balaaran ee loo gaysto dumarka," McKenzie ayaa sidaas leh. "Laakiin sabab kasta ha noqotee nidaamka cadaaladda dembiyada, iyo ilaa xad warbaahinta warbaahinta iyo sidoo kale markii la soo sheego, waxaa la rumeysan yahay inay haweenku yiraahdeen 'haa, waxaan rabaa in si xun loola dhaawaco. Waxaan rabaa in isbitaal la iga dhigo noloshayda galmo '. ”
“Inta badan, kama heli doontid wax ku saabsan qofka u dhintey magacooda iyo eedeyntaan liidata ee ay u oggolaatay dhammaan noocyada galmada ka hor inta aysan dhiman,” McKenzie ayaa hadalkeeda raacisay. "Haddii aan dib ugu noqonayno sannadihii 90-naadkii iyo 2000-meeyadii, waxaa jira magacyo haween ah oo ku baahsan wargeysyada hoostooda cinwaannada 'kinky sex mum', 'BDSM student student'.
Wax ka qabashada su'aalaha ku xeeran is-goyska adag ee jinsiga iyo rabshadaha waxay noqdeen arrin deg deg ah, kaliya maahan sababta oo ah caddeynta ayaa soo jeedineysa inay sii kordheyso dhimashada haweenka, laakiin sababta oo ah waxay muujineysaa jahwareer baahsan oo ku saabsan sida dadka da'doodu ka hooseyso 40 ay u galmoodayaan.
Galmada xunxun waxay caan noqotay sanadihii la soo dhaafay iyada oo aan cidna war u hayn, walina siyaasada galmada ee ka dambaysa baahinteeda dhalinyarada wali lama oga. Daraasad ay sameeyeen Savanta ComRes for BBC Radio 5 Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday in boqolkiiba 38 dumarka da'doodu ka yar tahay 40 sano ay la kulmaan dharbaaxis 'aan loo baahnayn', ku xanuujin, ama duqayn galmada. Boqolkiiba 42 haweenkaasi waxay yiraahdeen waxay dareemayaan "culeys ama khasab". Caadi ahaan caadooyinka galmada qalalaasaha ah ayaa badanaa lagu eedeeyaa inay ku sii badanayaan soosaaraha foosha xun ee ragga dhalinyarada ah. Laakiin, sida laga soo xigtay Mary Sharpe ee Abaalmarinta Abaalmarinta - hay'ad samafal ah oo ku takhasustay arrimaha sinada iyo waxbarashada galmada - sinada ayaa sidoo kale shuruud u ah haweenka inay raadiyaan "waxyaabaha xunxun si ay wax u dareemaan".
"Markii aad 25 jir tahay, adigoo ah gabar dhalinyaro ah, waxaad u badan tahay inaad daawatay 10 sano oo khaniisiin ah," Sharpe ayaa u sheegay Dazed. Waxay aaminsan tahay in xilligan dhaqameed ee socda ay ku dhiirigelinayaan haweenka inay si qalad ah u sinnaadaan xoreynta galmada iyo xad-gudubyada galmada - xaqiiqda ayaa ka sii dartay markii ragga dhalinyarada ah ay “gudaha galeen in dumarku rabaan in la garaaco” Muhiimadda jahwareerka halkan ka jiraa ayaa ah in haweenku aysan ahayn dhibbanayaashu dhaqanka, laakiin ay tahay inay si aan qarsoodi ahayn u qaabeeyeen damacyadooda, oo ay shuruud uga dhigeen inay raadsadaan galmo had iyo jeer ku saabsan dib-u-soo-saarista khiyaali aan iyagu gebi ahaanba iyagu iska bixinayn. halis ku jira.
Doodda galmada ee xun waxay sidoo kale dhibaato u geysaneysaa bulshada BDSM iyo dhaqankeeda. Dadku waxay soo amaahdeen bilicsanaanta oo ay u maleeyeen 'xaalad-kacsi' iyagoon qaadan qawaaniinta iyo tilmaamaha ku saabsan oggolaanshaha iyo nabadgelyada ay bulshada ku xiran tahay. Waxaa lagu keenay isweydaarsiga ugu weyn ee (lama-huraanka ahayn) 50 Sawiro Saamaynta ayaa kaliya dhiirrigelisay ku takrifalka iyo been-abuurka dhaqanka BDSM iyo bulshada, taas oo ah mid aad u hoggaansan sharciga - ogolaanshuhu wuxuu ku saleysan yahay dhaqanka jilicsan, iyo haddii aad ku sameyneyso caafimaad iyo badbaado, waad dooran kartaa ama ka bixi kartaa wakhti kasta .
"Wali way adagtahay in la sheego waxa mowjadani ku saabsan xadgudubyada galmada ee haweenka lagula kaco iyo sida loo difaacay ay inooga sheekeyneyso annaga iyo xilligan la joogo, laakiin inta aan xisaabtameyno, waxaa muhiim ah in ilaalinnada la dejiyo heerarka sharciga iyo dhaqanka labadaba"
Tixgelin kale ayaa ah sida rabshada hidda-wadareedku ay ula xiriirto 'xiisadda' xagga masiirnimada. Ragga in ay gaaraan qaababkii hore ee awood sheegashada xoog iyo xoog daqiiqad xiisad wadareed ah ayaa laga yaabaa in ay aad u fudud tahay in lasoo gabagabeeyo, oo aan haysanin caddeyn dhab ah (weli). Laakiin waxaa mudan in laga fiirsado bal in ragga 'gadaal u riixayaan' qarsoodiga qolka jiifka iyo ka fog indhaha dadweynaha. BoostaMeToo daqiiqad ayaa galmoodka lab ku tuurtay xaalad jahwareer: ragga qaar ayaa si lama filaan ah u arka dhaqankoodii hore ee galmo in hadda loo qeexay inay yihiin wax aan la aqbali karin; qaar kalena waxay dareemaan caro ku saabsan isbeddelada horay ugu dhaqaaqay iyagoo leh xoog weyn iyo xawaare sababta oo ah marxaladda ka dambeysa dhaqdhaqaaqa.
Conor Creighton, qoraa iyo hogaamiyaha fikirka oo u weecday dhanka aqoon isweydaarsiga orodka iyo maskax ahaanta, wuxuu rumeysan yahay inay "jahwareer badan ka dhaxeeyo xiriirka" ragga dhexdooda xilligan, laakiin daruuri maahan xanaaq. "Uma malaynayo in ragga ay xanaaqsan yihiin, laakiin xanaaqa ayaa ah dareenka kaliya ee ragga lagu dhiirigaliyo inay wadaagaan," ayuu yidhi. “Markaa haddii nin niyad jab, murugo, ama jahwareersana waxaa u soo baxa cadho, maxaa yeelay taasi waa sidaan bulsho ahaan u wada dhaqan nahay.”
Weli way adag tahay in la sheego waxa mowjadani ku saabsan xadgudubyada galmada ee haweenka lagula kaco iyo sida loo difaacay ay inooga sheegeyso annaga iyo xilligan xaadirka ah, laakiin inta aan la xisaabtameyno, waxaa muhiim ah in ilaalinnada la dhigo heerarka sharciga iyo dhaqanka labadaba. Dhinaca sharciga, tan waxaa daboolaya kuwa la mid ah 'Kama ogolaan karno ololahan iyo hadafkooda ah in lagu daro qodob lagu daro Sharciga Xadgudubka Guriga kaas oo hubinaya in taariikhda galmada ee haweeney dhimatay aan loo adeegsan karin dilkeeda la sheegay. Heer dhaqan ahaan, way adagtahay in la ogaado halka laga bilaabayo. Aqoonsiga in rabshadaha ka dhanka ah haweenka ay ka muuqato siyaabo qarsoodi ah oo qarsoodi ah ayaa loo baahan yahay - waxaana loo baahan yahay isla markaaba - marka kaliya ayaan isku dayi karnaa inaan xallino dhibaatada sii kordheysa iyo mararka qaarkood ee dhimashada taas oo ah danaha haweenka iyo ku khasbida noocyada galmada ee aadka u daran. iyaga oo qatar ugu jira, dhaqankeenana ka dhigaya mid aan la xisaabtami karin.
Waxaa lagu daabacay khadka tooska ah ee 6th Diseembar 2019
U doodista Mary Sharpe waxay ka hadleysaa waxyaabaha qaawan iyo sinada ee Nine
Advocate Mary Sharpe soo muuqday xalay on the Weriyaha BBC-da The Nine si looga wada hadlo caadi ahaanta qaawan ee qaawan, taas oo ahayd muujiyey ka dib xukunkii nin ee dilkii Grace Millane Noofambar la soo dhaafay.
Ms Millane - oo ah boorsada dhabarka Ingiriiska ee 21 oo sano jir ah - ayaa lagu diley New Zealand iyada oo maalintiina uu nin la socday.
Ms Sharpe, oo ah sadaqo Abaalmarinta Abaalmarinta Waxay cilmi-baaris ka sameyneysaa aaggan si ay dadka u marin karaan, waxay ka wada hadlayaan ifafaale iyo sharci xaqiijinta da'da oo ay haysay Dawlada UK.
Porn-ka taleefanka wuxuu ku kaxeynayaa dhallinta cilmiga galmada
Qodobka waxaa qoray Mark Howarth iyo Andrew Gregory Sabtida 5ta Oktoobar 2019
Tirada dhalinyarada da 'yarta ah ee caawimaad doonaysa ayaa kor u kacday. La-taliyayaashu waxay eedeeyaan fiidiyowyada 'jinsi kaamil ah' oo ay arkeen carruur ay da'doodu ka yar tahay toddoba jir
Tirada dhalinta da 'yarta ah ee raadinaya daaweynta galmada ee NHS-ta ayaa ka badan qaldan laba sano gudahood, marka loo eego tirooyinka rasmiga ah.
Khubaradu waxay ku boodeen bood boodaha baahsan ee qaawan ee qaawan ee loo adeegsado taleefannadooda casriga ah iyo warbaahinta bulshada, iyadoo mid ka mid ah dhallinta yari ku tiri filayaan in galmadu noqon “mid markasta kaamil ah”.
Isku soo wada duuboo, 4,600 caruur ah iyo dhalinyaro da’adoodu ay ka yar tahay 19 ama ka yar ayaa u baahday teraabiyada cilminafsiga 2017-18 iyo 2018-19. Labadii sano ee la soo dhaafay, waxaa jiray 1,400 gudbin.
Isku soo wada duuboo, dhallinta ayaa 1 ka mid ah 10 bukaan oo qaata la-talin xagga jinsiga ah, marka la barbar dhigo 1 30 kiiba laba sano ka hor, ayay sheegtay NHS Digital.
Muriel O'Driscoll, lataliye iyo daaweeye cilmi nafsi kaasoo daweeyey dhallinta, ayaa yiri: "Marka la joogo da 'yarta, mararka qaarkood, in kasta oo la heli karo barashada jinsiga, inta badan ma sameeyaan ogaadaan waxay sameynayaan ama filayaan in galmadu markasta ahaato mid hagaagsan.
Ma garanayaan waxay samaynayaan sababta oo ah waxay ku salaynayaan khibradooda suugaanta filimada qaawan ama fiidyowyada Facebook iyo dhammaan warbaahinta kale. Runtii maahan wax run ah - xaqiiqadu maahan mid kaamil ah. Mararka qaarkood galmadu way shaqeysaa; mararka qaar taasi ma aha.
Waxay filayaan dadku inay awood u yeeshaan inay ku faafiyaan miyir-beelka indhaha. Iyo, dabcan, haddii qof dhallinyar ah uu khibrad xun ku yeeshay hawshooda galmada hore, markaa maskaxdooda ayey ku ciyaareysaa. ”
O'Driscoll, oo u soo shaqeeyay xarumaha latalinta ee NHS iyo Brook oo hada si gaar ah ugu dhaqma Merseyside, wuxuu kaloo sheegay in wiilasha iyo gabdhaha mararka qaar ay ka walaacsanayeen in xubnahooda taranka aysan u ekaan ama u cabbir qaadan karaan kuwa ay internetka ku arkeen.
Caruurtu waxay ku turunturoodaan sawirada qaawan ee internetka laga soo bilaabo markay dhallinyar yihiin ilaa todobo, warbixin ayaa la helay bishii hore. Sahankan, oo ka yimid Guddiga Ingiriiska ee Kala-saaridda Filimka, ayaa soo jeediyay in rubuc-meelood ee waalidiinta ay dareemayeen in ilmahoodu aan ku arki lahayn internetka qaawan, laakiin in ka badan kalabar ayaa sidaas sameeyay. Da 'yarta ayaa ku tilmaamay dareen "jahwareer" wixii ay arkeen.
Mary Sharpe, oo ah madaxa fulinta ee hay'adda samafalka xiriirka 'The Reward Foundation', ayaa tiri: "Isticmaalka teknolojiyadda ee xad dhaafka ah waxay abuuraysaa dhallinyarro walwalsan, walwalsan oo qaba dhibaatooyin nafsi ah. Tan iyo markii la bilaabay xawaaraha sare ee xawaaraha sare 2006, faafinta dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ayaa ku soo badanaya dhalinyarada. Ma ku xiran yihiin?
"Internetka iyo warshadaha porn-ka waxay ku dadaalayaan sidii ay u diidi lahaayeen, laakiin waxaan u maleyneynaa inay ku xiran yihiin maxaa yeelay astaamaha badanaa waxay soo baxaan mar marka dadku ay maraan digtoor dijital ah oo maskaxda u oggolaanaya inay dib ugu milicsadaan raaxeysiga maalinlaha ah."
Labadii sano ee la soo dhaafay, tirada dadka da 'walba leh ee raadinaya caawimaad ayaa waxyar u kacay ilaa 47,300, kuwaas oo 10% ay ahaayeen dhalinyaro.
Claire Murdoch, oo ah agaasimaha caafimaadka maskaxda ee NHS England, ayaa yiri: “Waxa si cad u cad waa baahida loo qabo in qaybaha kale ee bulshada ay bilaabaan qaadashada mas'uuliyada ficilkooda, ay gutaan waajibaadka saxda ah ee daryeelka iyo inay joojiyaan dhaqanka xun ee internetka - sidaas darteed NHS looma hadhayin inay soo ururiyaan gogo '
Mary Sharpe ayaa laga soo xigtay maqaalkan aadka u xoogan ee ku saabsan dhaqanka warshadaha filimmada sawirrada. DIGNIIN: shaygan waxaa ku jira shey ay akhristayaasha qaar ka heli karaan walwal. Waxaa la daabacay 27 Sebtember 2019.
Sida warshadaha murugada leh loo nadiifiyey
Tiro goleyaal ah ayaa soo saaray hagida tuhunka galmada iyo cilaaqaadka ee loogu talagalay carruurta iyo dhallinta, kuwaas oo ku guuldareysta inay soo jiidaan dhibaatooyinka baahsan ee qaawan. Warbixinta JO BARTOSCH
CASHARKA CIIDAMADA ayaa dhimatay usbuucii hore; Koongareeska Magaalada Los Angeles wuxuu xaqiijiyey inay da 'da ahayd 40.
Waxay ku kacday sawir xumo iyadoo la adeegsanayo magaca Jessica Jaymes. Dhimashadeeda dhiciska ah maahan wax aan caadi aheyn kuwa loogu yeero "warshadaha madadaalada dadka waaweyn."
Filimkii ugu horreeyay ee qaawan ee Riyada lagu sameeyay wuxuu ahaa Little Girl Lost, markii ay ahayd uun 16.
Maanta, iyadoo jirka Jessica Redding ay sugeyso geerida ka dib magaalada Los Angeles, ugu yaraan hal websaydh oo ah halkaan oo kuyaala Britain ayaa u sheegaya caruurta ka da 'yarta Riyada markii ay ku jileysay filimkeedii ugu horeeyay inay ubaahan yihiin inay ka adkaadaan shaqadooda. sawiro qaawan.
Golaha Degmada Warwickshire "Ixtiraam Naftaada" tilmaanta, kaas oo ay ansaxisay Warwickshire Caafimaadka Dadweynaha, waxay caawimaad ka geysaneysaa jaan-goynta waxa ay ku qeexeyso khuraafaadka ku saabsan sinada.
Warwickshire waa mid ka mid ah golayaasha badan ee soo saaray tuhun laga qabo galmo iyo hagida xiriirka loogu talagalay carruurta, dhallinta iyo da 'yarta.
Akhristayaasha qaar ayaa u maleyn kara in dhibaatada caruurta daawashada filimka qaawan ay tahay mid wax u dhimaya fahamkooda jinsi, iyadoo la doodi karo inay horseedi karto faafitaanka wiilasha oo la jaan qaadaya wixii ay arkeen iyo faraxumaynta gabdhaha ee iskuulada. Kufsiga 'isku faca' xadgudubka galmada ee iskuulada ayaa ku kordhay boqolkiiba 521 boqolkiiba ee Warwickshire inta u dhaxaysa 2013-16).
Qaar kale ayaa laga yaabaa inay sheegaan sare u kac xagga unugyada labiaplasties ama Boqolkiiba 40 ee haweenka da'da yar kuwaas oo soo sheega in lagu cadaadiyo inay yeeshaan galmada, taas oo ah calaamado muujinaya in qaawan-galmoodka uu saameyn ku leeyahay bulshada.
Labaduba way qaldanaan doonaan, sida ku xusan hagida 'ixtiraamida naftaada', oo si kalsooni leh u sheegaysa mid ka mid ah "arrimaha ugu waaweyn ee dhalinyarada dhallinta daawanaya khaniisiinta ayaa ah in loo arko wax ay tahay inaysan 'ahayn inay sameeyaan.'
Isku daygooda ay ku dayasho mudan yihiin ee ah "kuwa wax dumiya," kuwa ka danbeeya hagida noocan ah waxay isku muujinayaan inay yihiin kuwa jaahil ah, misogynist ku darsaday falsafado ah.
Dhaleeceeyayaasha ku dhiirrigeliya inay soo bandhigaan daawashada “Libaaxyada Tababbarka Xalaasha ah ee 2,” “All Anal 3” ama “Slave for Night” (dhammaan magacyada sida wanaagsan loo iibiyo ee magacyadii hore loo soo sheegay Jessica Redding) ayaa laga yaabaa inaysan kobcin fahanka cunugga ee waxa xiriirka caafimaad u eg yahay sida, waa kuwo si cad banaanka ula soo baxa taabashada luul-ciriiriga ah kuwaas oo laga yaabo inay u baahan yihiin aragti wanaagsan.
Xaqiiqdii, sababta haween badan ay u nugul yihiin helitaanka baahsan ee sawirada ayaa ah in ay dhac u keentay jiilka iPhone ee xuquuqda ay u leedahay dareenka dhabta ah ee galmada.
Ma jiraan wax ka khaldan dib u xaqiijinta dhalinyarada in naas-nuujintu aysan dhab ahaan ka dhigaynin inay indho la’aan noqdaan, runtiina waxay ka caawin kartaa inay dareemaan degganaan jidhkooda.
Laakiin marka gabadh 12 sano jir ah ayaa warqad u qortay "Xushmee Naftaada", waxay ka walaacsan tahay inay qabatimay siilka iyo muujinta inay daawato markay ahayd "badhkii habeennimo," jawaabtu ma ahayn inay u sheegto in sawir-galmadu ay waxyeello leedahay mana ahayn inay u xaqiijiso in galmada iyo xad-gudubka lagu muujiyey aysan ahayn waxa ay ahayd. filan kara qof weyn.
Xaqiiqdii, Ixtiraam Naftaada waxay diideysaa fikradda ah in sawir-qaaduhu uu qabatimo ama waxyeelo u leeyahay sinaba.
Sida laga soo xigtay Mary Sharp oo ka tirsan Hay'adda Abaal-marinta, hay'ad samafal waxbarasho oo diiradda saareysa jaceylka, galmada iyo internetka, tani maahan run.
Wareysi lala yeeshay horaantii sanadkaan, ayay ku sharaxday: “Saadaalnimada xad-dhaafka ah ayaa isbeddeleysa sida ay carruurtu ugu kacaan galmo… da’ markay yihiin kuwa ugu nugul dhibaatooyinka caafimaad dhimirka iyo qabatinka. Qabatinka iyo walwalka caafimaadka maskaxda badankood waxay ku bilowdaan qaangaarnimada. ”
Natiijooyinka tan si cad ayaa looga arki karaa sicirka unugyada erectile, taas oo ka korodhay boqolkiiba qiyaasta 2-3 boqolkiiba ragga ka hooseeya 35 ee 2002 ilaa ku dhowaad 30 boqolkiiba tan iyo markii la bilaabay soo-dejista-free, porn qeexid sare leh.
Meel kale oo ka mid ah goobta 'xiriir su'aal' ayaa ku martiqaada isticmaaleyaasha inay ka doortaan liistada jawaabaha suurtagalka ah haddii ay ku qabtaan lammaanehooda daawashada waxyaabaha qaawan.
Dhab ahaantii waxaan ognahay in "wehelka" daawashada qaawan ay u badan tahay inuu yahay lab, in kasta oo Ixtiraamka Naftaada si farxad leh naloogu xusuusinayo “ragga iyo gabdhahuba waxay fiiriyaan porn.”
Haddii aad doorato "waa wax dumin" ama "waa kulushahay" ikhtiyaar, jawaabta ayaa ah inaad iska dhigto raaxo-darro shaqsiyadeed dhinac kasta maxaa yeelay qof walba "wuxuu jecel yahay fuleynimada."
Si loo caddeeyo, lahaanshaha “fiddle” ma ahan dhibaatada, saameynta burburinaysa ee qaawan ee loo adeegsado wada-shaqeynta qofka is-ixtiraamka waa.
Ka fog inuu dadka isku soo dhoweeyo, adeegsiga sawirada ayaa ah a qodobka ugu muhiimsan ee xiriirka burburka.
Iyada oo booqashooyinka goobaha boggaga qaawan ee xiisaha leh ay ka mid yihiin kuwa Netflix, Amazon iyo Twitter oo la isku daray, warshadda galmada shaki la'aan way sii noolaan doontaa iyada oo aan la helin caawinaad xagga xidhiidhka bulshada ah oo ka timaadda toosinta Warwickshire.
Si kastaba ha noqotee, hagida ixtiraamku waxay qabataa shaqo xiriir bulsho oo caddaalad ah warshadaha, iyagoo sharraxaya: "Wershadaha galmada waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee ay haweenku lacag badan ka badan yihiin ragga."
Dadka laga tirada badan yahay tani waa run. Qaado Sheena Shaw, tusaale ahaan. Waxay magac u yeelaysay nafteeda sida:boqoradda ruushka. "
Rosebudding waa eray loo adeegsado warshadaha qaawan ee loo adeegsado soo-saarista xubinta taranka, kaas oo malawadka looga soo tuuray futada.
Tani waxay u muuqataa inay tahay mid jinsi, sida Shaw si muuqata u cadeeyay: “Dhaqanka ayaa na baraya waxa aan jeclahay iyo waxa aan jeclayn.”
Haweenka sameeya khatartaan murugada badan, dhibaatooyin daran oo caloosha ah iyo baxsiga futada.
Markii wargeys ku xigeenka uu Shaw weydiiyay waxa ay sameyn karto haddii uu dhaawac dhaco, waxa ay ku jawaabtay: “Majirto cid weligeed ka hadlaysa arintaas. Waxay kaa dhigayaan inaad saxiixdid wareejinta ka hor intaadan sameyn seenyadan. Xaqiiqdi ma aadaysid inaad heshid kombuyuutar shaqaale.
Waxaa laga yaabaa inay si aan qarsoodi ahayn u siisay baahiyaha jir ahaaneed ee sawirada maanta jira, kuwa ka tagaya warshadaha ayaa soo sheega taas daroogada, xumaynta iyo ku-qasbid taagan waa caro; Haweenka intooda ugu badan waxay socdaan inta u dhaxaysa saddex iyo 18 bilood kahor intaadan bixin.
Aynu daacad noqonno, ma jiraan wax awood siinaya oo ku saabsan futadaaga malawgaaga inta lagu magacaaba “dhillo”, lagu buufiyay oo lagu sawiray kaameeraha.
In kasta oo xaqiiqooyinkan foosha xun ay sheegatay shabakadda 'Ixtiraamka Nafsaddaada' daraasado ayaa muujinaya in run ahaantii xiddigaha galmada dhadiggu ay leeyihiin isku-kalsoonaan sare iyo qanacsi shaqo marka loo eego celceliska dadka.
Bulsho-porn-ka qooyay, waxaan ubaahanahay inaan macquul noqono oo aan u diyaarino carruurta wax kasta oo ay macquul ugu arki karaan khadka tooska ah, cadaalad ahaan, tusmooyinka qaarkood ee ku tusaya Naftaada Waa mid naxariis badan oo fikir badan.
Laakiin nadaafadda warshadaha murugada leh ee lagu dhisay xumaanta haweenka iyo gabdhaha waa wax aan la cafin karin.
Hadafka ay u egtahay mid ku habboon, dhalinyarada diiradda saareysa isla markaana la xiriiri karo, Golaha Degmada Warwickshire waxay qatar gelineysaa jiil ay ku fekeraan in xadgudubka lagu muujiyey sawirada qaawan uusan ahayn mid caadi ah, laakiin la jecel yahay.
Jo Bartosch waa agaasimaha "Off Off", oo ah olole lagu joojinayo dalbashada sawirrada qaawan. Fadlan booqo websaydhkeeda oo tixgeli tabaruc www.clickoff.org.
Mary Sharpe ayaa si weyn ugu soo koobtay buuggan Peter Diamond, oo lagu daabacay 19 April 2019.
"Block porn" ee UK ee soo socota ayaa soo dhaweeyay ololeeyayaasha, laakiin walaaca hadalka ee bilaashka ah ayaa muujinaya kaniisadda.
Catholics waxay soo dhaweeyeen xayiraadda da'da ee xayeysiiska ee gudaha UK, taas oo ay sabab u tahay in la hirgaliyo bilaha soo socda, waxaana uu sheegay in Kiniisku uu horseed u yahay in uu la dagaallamo waxyeellada daroogada fara xumada.
Waxaa lagu dhawaaqay todobaadkan in xaqiijinta da'da lagu xaqiijin karo goobaha ladagaallanka ah laga bilaabo July 15.
Marka la soo bandhigo, dadka waaweyn waa inay caddeeyaan inay ka badan yihiin 18 iyagoo diiwaangelinaya faahfaahintooda ama iibsashada foojarro, si ay u galaan porno.
Hadalka bilaashka ah
Catholics oo gacan ka geysanaya ka hortagidda mukhaadaraadka iyo kaniisada Scotland ayaa soo dhaweeyay tallaabada, inkasta oo ay ka digtoon tahay in xoriyada hadalka waa in laga ilaaliyo faafreebka dawladda.
Matt Fradd waa qoraa kaniisad iyo af-soomaali ku saabsan mawduuca luuqada ee Maraykanka.
Wuxuu dhowaan bilaabay barnaamij cusub oo 21 ah oo ah Strive21 si uu dadka uga badbaadiyo waxyeelada daroogada.
"Waan ku faraxsanahay mamnuucidda xayiraadda xayawaanka ee UK," ayuu yiri. "Ma joojin doono dadka dhalinyarada ah ee isku dayaya in ay galaan porn balse nasiib wanaag waan aragnaa nooca caydhinta ah ee la soo bandhigay.
"Kaniisaddu waxay leedahay door ka ciyaarida dagaalka lagaga hortagayo filimmada. Sida kalluumaysiga Katooliggu wuxuu leeyahay, 'waxaa naloo abuuray sawirka iyo qaabka Ilaah', sidaas darteedna wuxuu isbeddelaa sida aan u aragno dadka. Kaniisadda wax barata mawduucan gaarka ah ayaa ah in laydhka laydhka nala siiyo - waxaa naloo yeeray inaanu ahaado macallin noo ah. "
Waxyeello aan la garaneynin
Mr Fradd ayaa intaa ku daray: "Isticmaalka Porn ayaa sanadihii ugu dambeeyay kuftay, caruurta badankoodna 8-12 waxay u egyihiin porno, waxayna yihiin doofaarro guinees ah oo loogu talagalay wax aanan si buuxda u garanaynin sida ay waxyeelladu u gaarto ilaa 50 sanadka soo socda.
"Waxaan u maleynayaa inay tahay wax in sanado XNUM ah ay dadku naga dhaadhicin doonaan niyad-jabka," sidee ayaad u samayn kartaa sidan, sidee ayaad nooga waraysan kartaa waxyaabahaas. "
"Waa masiibo sugaysa inay dhacdo, laakiin dadku waxay bilaabeen inay dhagaystaan ​​oo ay toosaan dhibaatooyinka carruurta ee daawashada porno."
Strive21 waxaa laga bilaabay Maraykanka labo todobaad ka hor waxaana horayba u soo maray rag ka tirsan 1,000 oo u saxiixay barnaamijka mukhaadaraadka, iyo kaniisad Katoolig ayaa muujisay xiisaha isticmaalka qalabka.
Wadaad Scottish ah oo ku lug leh wasaarada bogsoon ayaa sidoo kale soo dhaweeyay xayiraad kasta oo ka hortageysa kahortaga maandooriyaha.
Canon William Fraser, oo ah wadaad kaniisadda booqashada kaniisadda booqashada ee Taynuilt, wuxuu yiri: "Nasiib daro waxaan arkay waxyeelada maandooriyaha iyada oo shaqadayda lagu hagaajinayo wasaaradda.
"Caadi ahaan caadifada sigaar-cabista ayaa noqota caado in qof aan aheyn oo kaliya lakabka laftiisa laakiin sida ay waxyeelladu u tahay 'dhaawaca'. Tani waa sida nooc kasta oo khamri ah haddii ay cabto ama daroogo iyo inta badan ma'aha haddii qaybta 'dhaawaca' la bogsado ka dibna waxay noqoneysaa mid sahlan in lala tacaalo 'caado'.
Canon Fraser ayaa intaa ku daray in 'laga saaro' qof ka mid ah qabatinka sigaarka ayaa qaadan kara hal kulan, laakiin 'xaaladaha ba'an' waxay qaadan karaan dhowr bilood ama xitaa sanado si wax looga qabto.
"Had iyo jeer waa in la xusuusnaadaa in awoodda inagu dhex jirta Ciise Masiix ay ka weyn tahay awood kasta oo adduunka ah," Canon Fraser ayaa sidaas yidhi, isaga oo intaa ku daray in 'Ilaahay naga dhigo lacag la'aan sidii uu uga adkaaday dembiga oo dhan iskutallaabta. '
Porn waa shirkad caalami ah oo lagu magacaabo 75. Daraasad 2016 ah oo lagu daabacay Jaraa'idka Dhaqaalaha ee Bariga Dhexe ayaa shaaca ka qaaday in dadka ay u arkaan in ay si joogta ah u arkaan porno ay u badantahay in ay is-guursadaan kuwa aan haysan.
Mary Sharpe waa madaxa fulinta ee The Reward Foundation, oo ah hay'ad samafal ah oo ku saleysan Scotland oo eegaysa sayniska ka dambeysa galmada iyo jacaylka.
Ms Sharpe ayaa yiri: "Waxaan si buuxda u taageersanahay sharciyada soo socda. Waalidiintu inta badan waxay u maleynayaan in ay porn ay la mid tahay sidii ay ahayd 20 sano ka hor, laakiin hadda waa ka sii xun. Waxay ku wadaa falal badan oo gardaro galmo ah.
"Waxay saameyn weyn ku yeelanaysaa maskaxda dadka, gaar ahaan dhalinyarada kuwaasi oo kufilmaamaya inay wax ka qabtaan arrimahaas."
Pope ayaa ansaxiyay Ms Sharpe's charity, waxaana uu la shaqeynayaa iskuulada Catholic si loo sameeyo qorshe casharro macalimiinta.
"Waxaan u maleyneynaa in sharciyadan cusub ay muhiim tahay. Dhibaato maaha in la xalliyo dhibaatada laakiin waxbarashada waa mid muhiim u ah dugsiyada iyo guryaha, "ayay tiri.
"Waxaanu abuurnaynaa oo horumarineynaa qorshooyinka casharrada ee dugsiyada guud ee Scotland, oo ay ku jiraan kuwa Katoolikada ah, halkaas oo aan u abuuri doonno iyaga si waafaqsan waxbarista Kiniisadda iyo ilaha qorshaha ehelada Ilaah.
"Kaniisadaha iyo kaniisadaha ayaa kaalin weyn ka ciyaari kara sidii looga hortagi lahaa arrinta. Waa muhiim in la baro Catholics mawduucan, kaniiskuna kaliya ma tukan karo arrintan oo kale waa ay maqnaan doontaa - waa inay dhagaystaan ​​oo sameeyaan iimaan wanaagsan iyo haddii ay sidaas sameeyaan waxay ku hogaamin karaan arrinta. "
Awood u siinta wadaadka
Maryan waxay intaas ku dartay in wadaadadu ay sidoo kale 'awood u leeyihiin' inay ka hadlaan arrinta ama waxay dadka siiyaan talo ku saabsan halka laga kaalmeeyo.
Xoriyadda hadalka ee hadalka ayaa si kastaba ha ahaatee kor u qaaday walaaca ah in sharciyada cusubi ay arki doonaan in ay hoos u dhigaan hadalka hadalka. Mamnuuciddu waa qayb ka mid ah dadaallada xukuumadeed ee ballaadhan si ay u xakamayso waxa ay u aragto hadallada nacaybka ah ee internetka.
Afhayeenka Kaniisadda Katooliga ee Scotland ayaa yiri: "Waa lagama maarmaan, in xeer kasta oo cusubi uu ka dhigayo wax ka qabashada 'waxyeellada internetka' iyo 'qalabka gardarrada' xejiya xuquuqda aasaasiga ah ee xorriyadda hadalka, fikirka, maskaxda iyo diinta taas oo u oggolaanaysa badalaada aragtida iyo doodda, iyadoon cabsi ama naxariis lahayn.
"Xoojinta ammaanka internetka ee carruurta iyo kooxaha nugul waa mid aad muhiim u ah. Maqnaanshaha qeexida ujeeddada 'waxyeellada' si kastaba ha ahaatee waa adag tahay in la arko sida tan loo samayn karo. "
"U oggolaanshaha maamulaha madax-bannaan inuu go'aan ka gaaro haddii ay tahay mid waxyeello u leh oo laga yaabo inay mamnuuceyso, waxay u muuqan kartaa inay xaddidan tahay muujinta caqiidada diimeed."
Golaha Waalidiinta Katooligga ee Scotland ayaa soo dhaweeyay xannibaadda porn.
Jo Soares, oo madax ka ah kooxda waalidiinta ee Adeega Waxbarashada ee Iskotishka ah ee Scottish Catholic ayaa yiri: "Sharciga cusubi waa inuu ka dhigaa mid aad u adag carruurta in ay galaan waxyaabaha aan habboonayn ee galmada ah si khaas ah ama khibrad u leh.
"Waa muhiim in aan xakameyno nacaybka qarsoodiga ah si aan caruurteena u horumarineynin dabeecadaha aan aaminsaneyn ee ku saabsan dabeecadaha jinsiga iyo ogolaanshaha ama aragtiyo aan caadi ahayn ee xiriirka iyo muuqaalka jirka.
"Xaddidaadda filimada internetka ee qaangaarka ah ee dadka waaweyn ayaa rajeynaya in ay adagtahay in caruurteena lagu hagaajiyo maaddooyinka wax bara si waafaqsan rumaysadeena sharafta qof kasta oo aadanaha ah."
Viagra oo ah dawada qaab nololeedka ayaa aragtay Mary Sharpe oo ka soo xigatay maqaalkan hab-nololeedka Huffpost ee ka soo baxay 3 Abriil 2019.
'Waxay Qaadaan Kahor Inta Aysan Naadiga Aadin': Waa maxay sababta Viagra ay u isticmaaleyso Jiil cusub
Ma ahan oo keliya dawo da 'weyn oo loogu talagalay ragga waaweyn, Viagra waxaa si raaxo leh ugu adeegsada wiilasha raysal wasaarehooda. Waxaa qoray Sophie Gallagher
Waxay ahayd markii saddexaad ee uu Alex * isku dayo inuu kondhamka geliyo oo uu ku guuldaraysto. In kasta oo la kiciyay oo laga warqabo in tani ay u badan tahay inuu yahay keliya fursadda uu ku galmoon karo naagtii uu la kulmay horaantii fiidka, ma uusan sii joogi karin. Si kasta oo maskaxdiisu doonayso inay galmo yeelato, jirkiisu muu hoggaansamin.
Ugu dambeyntiina wuu aqbalay xaaladda, raaligelin siisay taariikhdiisa “walaaca waxqabadka” - oo ay ka sii dartay khamrigii qamriga iyo maandooriyaha - wuxuuna wacad ku maray in uusan mar dambe dhicin. Maalintii xigtay ayuu u tegey farmashiistaha wuxuuna iibsaday baakad oo ah kiniiniyada '8 sildenafil' oo inta badan loo yaqaan Viagra.
Alex, oo da'diisu tahay labaatan-jir, ma ahan mid ku habboon fikirka qofka isticmaala Viagra: bulshada ayaa weli u aragta kiniinka buluugga ah mid la mid ah ragga guursaday, oo ay suuragal tahay inuu caafimaad darro qabo iyo inuu la xanuunsado da 'ama cudur la xiriira jirro. Laakiin kiiska Alex, iyo go'aankiisa ah inuu u isticmaalo viagra inuu wax ka qabto dhibaatada, waa mid aan caadi aheyn.
Waa bilo 12 ah tan iyo markii Viagra laga helay Boqortooyada Midowday iyada oo aan la qorin warqad dhakhtar. Farmashiistayaashu waxay go’aansadaan inay iska iibiyaan ragga daroogada, oo lagu magaacabo 'Viagra Connect' oo ay sameeysay soo saaraha Pfizer, iyadoo lagu saleynayo caafimaadkooda iyo daawada kale ee ay qaadan lahaayeen. Ujeedada bilowga ah markay kordhineysay helitaanka daroogada ee 2018, waxay ahayd inay la dagaallanto tirada kaniiniga been abuurka erectile erectile in si sharci darro ah looga iibiyo internetka. Laakiin goaanku wuxuu sidoo kale lahaa cawaaqib xumo aan laga fileynin oo ku soo bandhigista daroogada qeyb cusub oo suuqa ah.
Murray Blacket, oo ah daweeyaha ku takhasusay galmada waqooyiga London, ayaa sheegaya inuu arko dhalinyaro badan oo Viagra u qaadanaya “caymis caymis” ama “xoojin toogasho” nolosha qolka jiifka. Badanaa tani waxay noqon doontaa ka hor intaysan habeenkii u bixin.
Waxaan ka hadlaynaa LGBT goobta chemsex Laakiin goobta tooska ah waxaa jira u dhigma wiiggii usbuuca ee lumay halkaas oo aad la xidhiidho qof, qaado koronto iyo Viagra, hoos u deg godka bakaylaha, ka soo bax Isniinta,
Bilowgii Agoosto 2017, sideed bilood ka hor intaan lagu iibin wadada weyn, dhakhaatiirta Boqortooyada Midowday ayaa soo tabinayay isbeddel ku soo kordha oo ragga da'da yar ah ayagoo si qarsoodi ah ugu iibsada daroogada internetka iyadoo la doonayo in kor loogu qaado waxqabadka galmada ama sida Alex oo kale, si looga hortago isticmaalka daroogada kale ee madaddaalada taasoo adkeyneysa in la ilaaliyo kacsan.
Dadka ku nool Boqortooyada Midowday waxay u badan yihiin kuwa kale ee Yurub, America, Australia ama Kanada, in la isku daro galmada daroogada, sida ku xusan Baadhitaanka Daroogada Caalamiga ah ee 2019, iyada oo aan loo eegin jinsiga ama jiheynta galmada. Waxyaabaha ugu badan ee la istcimaalo waxay ahaayeen aalkolo, xashiishadda, MDMA iyo kokain - dhammaantood waxay xakameyn karaan waxqabadka galmada haddii lagu qaato qiyaaso aad u sarreeya.
Viagra waxay ku shaqeysaa iyadoo hubineysa in socodka dhiigu ku filan yahay guska si uu usocdo. Ma laha saameyn deg deg ah waxayna shaqeysaa oo keliya marka ninku kacsan yahay. Markaa miyaydaan lugaynaynin goob lagu caweeyo oo kacsan saacado dhamaad ah, laakiin waad awoodi doontaa inaad ku tiirsanaato haddii aad nasiib u hesho dhamaadka habeenka.
Blacket waxay leedahay in inbadan oo kamid ah dhalinyarada qaadatay waxay yihiin xirfadlayaal - macalimiin, qareeno, tababarayaal shaqsiyadeed. Viagra ma ahan mid qaali ah sidii ay ahaan jirtay, laakiin wali waxay ku iibineysaa £ 19.99 oo loogu talagalay afar xabbadood oo kiniin ah ama £ 34.99 sideed. Aan raqiis ahayn waxa,, wax ku ool ah, 'uun haddii ay jirto'.
“Ragga da'da yari si kalsooni leh ugama kalsoonaadaan awoodahooda galmada,” ayaa ay tiri Blacket. Dadkani waxay u qaadanayaan Viagra sidii kor-u-qaadista kalsoonida. Maahan wax ku saabsan galmo xiiso badan - waxay kaliya ku saabsan tahay in lagu sameeyo 'galmada caadiga ah'. "
Hoos udhaca kalsoonida badanaa waa iskuxiran iyadoo ay kordheen tirada dadka sida joogtada ah u daawanaya qaawan ee internetka. Daraasadihii ugu dambeeyay ee la helay inta u dhaxaysa 14% iyo 35% ragga dhalinyarada ah waxay yiraahdeen waxay la kulmaan curyaannimo toos ah marka loo eego 2-3% kahor 2008. Maryan Sharpe oo ka mid ah Abaalmarinta Abaalmarinta, samafal waxbarasho oo diiradda saaraya jacaylka, galmada iyo internetka ayuu u sheegay The Guardian: "Tan iyo 2008, markii qulqulka-qulqulaya, porn-qeexitaan sare si aad ah loogu diyaariyey, si isdaba joog ah ayey u kacday."
Beddelka muuqaalka shukaansi wuxuu sidoo kale leeyahay door uu ciyaaro, ayay ku dooday Blacket, iyadoo la kordhayo barnaamijyada shukaansi iyo diiradda la saarida is-dhexgalka galmoodka ee caadiga ah oo macnaheedu yahay dadku inay soo jiitaan galmo. "Haddii aysan kuu fiicnayn adiga markaa dadka ayaa sii socon kara oo la kulmi kara qof kale," ayuu yidhi. Dhaqanka hal habeen istaagayaa waa mid la isku weydaarsanayo arintaas. Hal fursad ayaad haysataa. ”
Kaliya kaliya majirto cadaadis dheeri ah oo had iyo jeer diyaar u ah galmada, laakiin inta badan is-dhexgalka galmada waxaa lagu gartaa jiritaanka khamriga iyo daroogada kale ee carqaladeeya waxqabadka. “Raggaasi badanaa waxay galmo yeeshaan cabitaanada ka dib, haddii kale ma ahan daroogo. Qaadashada Viagra waxay u muuqataa inay xiriir la leedahay fikirka ah 'Waxaan yeelan karaa dhawr dhibco oo dheeri ah wali waan awoodi doonaa inaan sameeyo'.
Fikirkaasna wuxuu noqday mid caadi ah, maaddaama Viagra uu ku sii xoogaysanayo dhaqanka guud, Blacket ayaa tiri. "Hada waxaa jira xayeysiisyo dhulka hoostiisa iyo dhinaca basaska loogu talagalay Viagra [oo la keenay] Vespa. Shirkadahaani waxay arkeen isbaddal suuqa ku yimid, waana ay ka faa'ideysanayaan. ”
Waxay umuuqataa inaad haysato shirkad nooca Deliveroo-ka ah oo Viagra albaabkaaga keenta waxay door ka qaadatay samaynta daroogada oo aad u soo jiidaneysa dhalinyarada. Halkii aad ka xadi lahayd qolka fadhiga ee aabaha aabbahaaga, waxaad ku dalban kartaa habka aad u Pizza ahaan lahayd. Saamaynta isbeddelka dhaqankan ayaa keentay in Blacket ay aragto tiro badan oo ragga ah oo aan ka walwal qabin waxqabadka, kuwaas oo u maleynayay in qaadashada Viagra ay ka dhigeyso "xitaa mid adag" iyo galmo badan oo raaxo leh.
Blacket wuxuu leeyahay walwal ah in qaar ka mid ah kuwa doorta inay isticmaalaan Viagra madadaalo ay qaataan qiyaaso ka badan inta uu caadi ahaan kugula talin lahaa. Kuwo badan ayaa qaata kiniiniyada 100mg, halka NHS-ta ay ku talineyso qiyaas 50mg ah hal jeer maalintii. "Dadku dhab ahaan ma yaqaaniin macnaha qiyaasta - waxay adeegsadaan maskax fiitamiin ah in wax uun la qaato." wuu sharaxayaa. ”
Qaadashada sildenafil aad u badan waxay sababi kartaa waxyeelooyin aan fiicnayn sida madax xanuun, dawakhaad, calool xanuun, sanka oo xirma iyo aragga oo la beddelo. “Waxaan weydiiyay qaar ka mid ah sida ay dareemayeen maalintii ku xigtay waxayna dhahaan si xun,” ayuu yidhi. Qaar ka mid ah ayaa ii yimid oo weyddiistay 'Miyaan walwal qabaa? Ilaa intee ayaan waxan tan u samayn karaa?
Waxay ka dhigeysaa inuu ka walwalo inay dadku u isticmaalayaan kiniiniyada inay ku ridaan arrimo waaweyn, qoto-dheer oo xididdada ka horjoogsanaya noloshooda galmada. “Waxay bandow ku soo bandhigayaan dhibaatada Viagra. Tani waa inay ahaato mid ku meel gaadh ah.
Qodobbadii laga soo qaaday Mary Sharpe ee March 11 Sheeko ku yaal The Guardian ayaa ka muuqday buuggan bogga shabakada Katooligga LifeSiteNews. Maqaalkani wuxuu soo xiganayaa ilaha aan xushmeyno oo ay ka mid yihiin dareemaha 'nudaha' Dr Donald Hilton iyo yourbrainonporn.com.
Maarso 29, 2019, (LifeSiteNews) - Ragga da'da yar ayaa ka lumay awooddooda inay galaan xiriirka galmada dabiiciga ah haweenka sida filimada sawirada ee soo noqnoqda oo sawiraya muraayadahooda, taasoo wiiqaysa awooda ay ku sameyn karto galmada.
Dareen ahaan, raga dhalinyarada ah iyada oo loo marayo 30s-ka waxay ka horimanayaan jinsiga, lidka ku ah isu-dhowaansho la'aanta, ka soo horjeeda, ka horjoogsiga jacaylka, guurka, ka ladamaasho farxad.
Iyo in tallaalkaas lagu maamulo lacag la'aan internetka.
"Ilaa 2002, dhacdooyinka ragga hoos yimaada 40 ee ED (xitaa erectile) waxay ku dhawaadeen 2-3 boqolkiiba," Mary Sharpe oo ka mid ah Abaalmarinta Abaalmarinta ayaa sheegay The Guardian-ka. "Sababtoo ah 2008, marka ay bilaashka noqoto, santuuqa qeexan si aad ah ayaa loo helaa, si joogta ah ayuu u kordhay."
"(P) halku waa isbedelaa sida carruurtu u noqoto galmo," sii waday Sharpe, oo ay dhacayso, "marka ay da 'yihiin marka ay yihiin kuwa ugu nugul dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo mukhadaraadka. Inta badan xayawaanka iyo jirrooyinka maskaxda ayaa bilaabanaya markay qaan-gaarayaan. "
Maqaalka Guardian ayaa soo jeediyay in, "Ilaa saddex meelood oo ragga dhallinyarada ah ay hadda la kulmaan cillad aan caadi ahayn."
Xaaladdu waxay noqotay mid aad u caan ah oo ay ku leedahay magaca: "Porn-Caused Erectile Disruption" (PIED).
"Halkii ay ku xiran lahaayeen xaaskiisa jacaylka dhabta ah ee dadka dhabta ah, dhalinyarada maanta waxaa badanaa laga helaa shaashadda horteeda, waxana uu xirxiraa maskaxdiisa maskaxdiisa si uu keligiis qolkiisa ugu noolaado, isagoo u adeegsanaya jimicsi halkii uu ka qayb qaadan lahaa," ayuu yiri fiidiyow ficil ah, Maskaxda Dhallin-yarada waxay la Kulmeysaa Porn-ka Internet-ga ah.
"Shisheeye waa erayga aan isticmaali lahaa si aan u sharaxo sida ay dareemeyso markii aan isku dayey inaan galmo la sameeyo haweenka dhabta ah," ayuu yiri hal dhallinyaro ah oo lagu soo duubay fiidiyaha. "Waxay dareemeysay dabiici iyo shisheeye."
"Waxaa la mid ah sida aan u helay si aan u fadhiisto shaashadda (masturbating) in maskaxdayda u arkaan in ay noqoto jinsi caadi ah halkii jinsi dhabta ah," ayuu ku daray.
"Dumarku iima soo celin, ilaa ay ka sameeyaan laba-cabbir oo ka dambeeya kormeerkayaga muraayadda," ayuu yiri mid kale.
Qaar kale waxay soo sheegaan rajadooda kaliya ee ay ku gaari karaan oo ay sii wadi karaan koritaanka inta lagu jiro isku-xirnaanta inay tahay "malaha porn."
Maaddaama ifafaalaha uu cusub yahay - ka dib oo dhan, helitaanka internet-ka xawaaraha sare leh oo ay weheliso sahlanaan, marin gaar loo leeyahay oo loo maro taleefannada casriga ah, Ipads-ka, iyo kombiyuutarada laptop-ka ayaa ah hal-abuurnimadii ugu dambeysay - daraasado xeel dheer ayaa loo baahan yahay in la sameeyo.
Dhanka kale, caddaynta anecdotal waxay udub dhexaad u tahay khabiiro - oo ay ku jiraan dhakhaatiirta cilmi nafsiga, dhakhaatiirta cilminafsiga, iyo cilmi-baadhayaasha cudurrada - waxay soo sheegaan in ay maqlaan noocyada lamaanaha ee ragga dhalinyarada ah ee da 'weyn ee hore u ahaan lahaa maskaxda foosha galmada.
Cilmi-baaristaha Paul Church ayaa u sheegay LifeSiteNews in inkastoo aysan jirin wax caddayn ah oo loo hayo xiriirka u dhexeeya isticmaalka sigaarka iyo cilladda erectile, sababtoo ah "wax macno ah iyo dhakhaatiir badan iyo daaweeyeyaasha, oo ay ku jiraan naftayda, waxay si adag u aaminsan yihiin inay tahay dhibaato weyn oo ku wajahan jiilka xiga. "
"Way adag tahay in la ogaado inta ay le'eg yihiin dhallinyaro da 'yar oo ay kufsanyihiin ED. Laakiin way cadahay in tani ay tahay dhacdo cusub, mana aha wax dhif ah " xusay Dr. Ibraahim Morgentaler, Agaasimaha Rugta Caafimaadka Boston iyo macalinka kiliiniga ee kaadiheysta ee Harvard Medical School.
"Waan ogahay in taasi ay run tahay sababtoo ah waayo-aragnimadayda tan ay ku dhacdo dadka aan la shaqeeyo," ayuu yiri Maureen Newberg, oo ah shaqaale bulsho oo ruqsad haysta (LCSW) oo ka shaqeeya aagga Washington, DC.
"Waxaan ku jiraa xirfad gaar ah oo 95 boqolkiiba macaamiishayda ay yihiin wiilasha iyo ragga. Ku dhawaad ​​dhammaan macaamiishani waxay qabaan dhibaatooyin xaasle ah ama qabatimid fara badan, "guurka guursanaya iyo daaweeyaha qoyska David Pickup ayaa u sheegay LifeSiteNews.
"Khibrada aan u leeyahay dhibaatooyinkooda iyo guusha ay ka qaadatay isticmaalka sigaarka waxay keentay in la ogaado in pornadu tahay 'daroogo' awood leh '' ayaa yiri Pickup.
Maandooriye sigaar-cabbista ah, sida macaamilooyin kale, ayaa sababa noloshii dhalinyaro oo dhan. Dr. Gerard van den Aardweg, oo ah cilmi-nafsiga cilmi-nafsiga ee Yurub, ayaa soo koobay:
Addoonsiga-addoonsiga waa niman sabool ah, oo ku go'doonsan xiriirkooda aadanaha. Yey yey. Markasta oo ay sii daayaan porno, waxay sii xoojinayaan mashquulka caruurnimadooda iyagoo doonaya inay noqdaan "nin weyn," iyo in yar oo ay awood u yeeshaan xiriir toos ah oo toos ah
Cawaaqib xumada aan la fileynin ee ka yimaada isticmaalka jilicsanaanta ee ragga dhalinyarada ah ayaa laga yaabaa in ay ka sii gudubaan wixii ka dambeeya cillad aan fiicnayn iyo burburinta xidhiidhada guurka ee caafimaad qaba.
Mark Regnerus, oo ah borofisar cilmiga bulshada ee Jaamacadda Texas ee Austin iyo saaxiib kale oo ka tirsan Machadka Austin ee Daraasaadka Qoyska iyo Dhaqanka, soo jeediyay isku xirka u dhexeeya isticmaalka sigaarka iyo taageerada isku-guurinta isku-jinsiga ah ee 2012.
Cilmi baaraha xusay in "Ragga dhalinyarada ah ee taageerada ah ee ku saabsan dib u caddeeynta guurka ma noqon karaan gebi ahaan sheyga ujeedooyinka ku saabsan xorriyaadka ballaaran, xuquuqda, xoriyada, iyo balanqaadka sharafeed ee cadaaladda. Waxay noqon kartaa, ugu yaraan qeyb ahaan, soo-saarka soo-saarka joogtada ah ee ficilada kala duwan iyo galmoodka garaafka, "ayaa markhaati u mariyay porno internetka.
"Shabakadaha ugu caansan shabakadaha pornographic wax yar ayaa ku takooraya hal jinsi - ama nooc noocaas ah - mid kale," ayuu yiri Regnerus. "Gacaliyeyaashu waxa lagu daaweeyaa dab-bakhti-dab-damis ah oo ku saabsan kala duwanaanshaha jinsiga-dhaqanka."
"Kuwani maaha awoowgiisa" Playboy ", ayuu raaciyay.
Xayeysiinta sunta iyo awoodda qaylo-dhaanta ee internetka
Sida dagaalka ka dhanka ah "xoriyada hadalka" xuquuqda sawir-gacmeedyada iyo warshadaheeda ayaa la sameeyay muddo tobanaan sano ah, waxoogaa yar ayay ogaadeen in dhalinyarada da 'yarta ah ay yihiin naftooda inay noqdaan dhaawac damaanad ah. Haatan gogol-xaadhintu waxay noqotaa mid aan suurtogal ahayn in la iska indha-tiro
Dr. Donald Hilton, oo ah macalin ku xeel dheer cilmiga neerfaha, Jaamacadda Caafimaadka ee Jaamacadda Texas ee San Antonio iyo xubin ka tirsan Golaha Agaasimayaasha Machadka Caafimaadka ee Caafimaadka Galmada, ayaa ku qoray maqaal cinwaan looga dhigay Filinka Jirka: Falalka Dabka Naafada Suntu (aan la heli karin).
Waa meel walba. Pornhub, oo ah bogga labaad ee ugu weyn ee shabakada shabakada ee shabakada netka, waxay ku yeelatay billaha dahabka ee 92, inay ku filnaadaan fiidiyowyada 2016 ee qof kasta oo adduunka ah. Waxay noqotey habka ugu muhiimsan ee waxbarashada jinsiga ah ee dhalinyarada iyo xitaa marmarka qaarkood, iyada oo dhalinyaro badan ay arkeen galmo galmo, oo ay ka mid yihiin in ka badan laba qof.
Soo deynta galmada sunta ah ee bini-aadamka waxay dhaawaceysaa kuwa u fiirsada waxayna la qabatimaysaa kuwa sii wadaya isticmaalkeeda. Si kastaba ha noqotee, qodobbadan ayaa si xoog leh uga soo horjeedda warshadaha luuqada iyo kuwa raali geliya tacliinta ee taageera. Waxay yiraahdaan dhibaatada kaliya ee lebbiska waa ceeb iyo anshax dhisid in diin diimeed la dul dhigo.
Dr. Jeffrey Satinover, a qoraal oo loo dhiibay guddiga Senateka ee 2008, ayaa yiri: "Mar walba waxay u muuqatay mid caddaynaysa in pornography aysan waxba ka ahayn qaab ''. Sidaas daraadeed, mudnaanta rasmiga ah, la'aanta, ama xumaanta had iyo goor ayaa laga doodi karaa marka loo eego 'fekerka', iyo sharciyadayada wax badan ka tarjumaan. Waxaan ka doodnaa 'anshaxa' ee suugaanta sawirrada; dabiiciga ah sida 'sare' ama 'low'; haddii ay leedahay wax 'qiimo madax furasho ah.' Tixraacyada 'shuqullada' ee 'suugaanta' iyo 'ficillada' ee qoob ka ciyaarka 'qoob-ka-ciyaarka' waxaa lagu sharxay heerarka ugu sarreeya ee falsafadda dastuurka Mareykanka - ereyada calaamad muujineysa in fahamka fara-xumeynta ay tahay ficil ahaan iyo ficil ahaan. "
"Marka la eego kombuyuutarka, nidaamka gawaarida ee kicintaas kicinta ah (pornography internetka) way ku dhowdahay inay iska caabiso," ayuu sii raaciyay Satinover.
"Waxay u egtahay sidii aan u samaynay nooc ka mid ah hirowiinada 100 oo ka xoog badan sidii hore, oo laga faa'iideysan karo qarsoodiga ah ee gurigiisa iyo si toos ah maskaxda loogu siiyay indhaha," ayay raacisay Satinover. "Waxaa hadda laga helaa xudduud aan xadidnayn iyada oo la adeegsanayo shabakad isku-dhafan oo isku-dhafan, oo lagu ammaanay farshaxanka ayna ilaalinayaan Dastuurka."
Dib u soo celinta dhaawaca
"Timo jilicsan oo jinsi ah ayaa caqabad ku ah inay halkaan joogaan," ayuu sheegay Tim Tim Lock, oo ah cilmi-nafsi cilmi-nafsiyeed iyo caawiye macalin ah ee machadka cilmiga cilmi-nafsiga, Jaamacadda Divine Mercy.
PIED waxay nala joogi doontaa illaa ragga oo la kicin karo ficillada is-xakamaynta, waalidiintuna waxay ku qancin karaan baahida loo qabo in ay isticmaalaan shaashadaha internetka (iyo xisaabtanka internetka) si looga hortago caruurtooda inay galaangal u yeeshaan bogagga aan habooneyn, " ee LifeSiteNews. "Waa wax sahlan ama dadaal la'aan in la koriyo ilmo qiimeeya is-xakamaynta, daahirnimada, nadiifnimada, iyo xishmeynta. Macallimiinta carruurta waa inay marka hore ku qanciyaan qiyamkaas. "
"Waa iib adag," ayuu yiri Lock. "Haddii aad ogtahay in Rabbigeenu u yimid inuu nolol siiyo, iyo in uu si badan u siiyo."
Dr. Hilton wuxuu qeexayaa afar talaabo oo muhiim ah:
Ugu horreyn, waa in aan ilaalinno jiilka xiga ee jinsiga sunta ah ee kor u qaadaya warshadaha luuqada iyo rafaadyadooda;
Marka labaad, waa in aan ku laabannaa bulsho ay dadka waaweyni diidaan nacaybka leexashada;
Seddexaad, dhaqankayaga sii kordhaya waa mid aan loo dulqaadan karin midabtakoorka iyo jinsiga, haddana waxaan u dabaaldegnaa labadaba haddii dadku galmo iyo kamaraduhu ay soo dhacayaan. Waa in aan qabanno warshadaha nacaybka ah isla heerka;
Qodobka afaraad, waa in aan ku laabannaa dhaqanka ixtiraamka, xushmadda iyo naxariista, taas oo ah diidmada dhaqanka gabdhaha casriga ah.
Xog hodan ah oo ku saabsan joojinta porn iyo ka baxsiga waxyeelada ay waxyeeladu gaarsiisan tahay waxaa laga heli karaa bogga internetka ah ee faa'iido leh, Maskaxdaada on Porn.
Jawaabta diinta kiristaanka ah ee addoonsiga isticmaalka sigaarka ayaa la bixiyaa Adkee.
11 Maarso 2019. In maqaal weyn oo hab nololeed by Amy Fleming, Mary Sharpe ayaa si weyn loo soo xigtay The Guardian-ka isticmaalka sigaarka iyo isticmaalka qaloocnaanta erectile.
Miyuu jilicsan yahay dhalinyarada ragga ah?
Ilaa saddex meelood oo ka mid ah ragga dhallinyarada ah ayaa hadda la kulma cillad aan caadi ahayn. Qaarkood waxay u jeestaan ​​tallaabooyin xad-dhaaf ah sida galmada gaduudka ah - laakiin waxay la haraatid sawiradooda si ay u noqdaan xalka keliya ee loo adeegsado?
Muuqaalka: Nishant Choksi
THalkaan waxaa ah olole xayeysi ah oo lagu dhajiyo tunnels of Underground London oo ku saabsan slogan "ED IS DEAD" ee ku xiga sawir nin ah oo aragga si fiican u eegaya uu. "Ha ka welwelin," waxay ku tiraahdaa qoraal yar oo ka hooseeya. "Ed ma ah nin. Waa wax la mid ah. Waa wax gaabis ah oo ku dhaca cillad aan caadi ahayn. " calaamad cusub ee sildenafil (inta badan loo yaqaan Viagra), taas oo aynu u malaynayno in ay u malaynayso in ay dilayso dhibaatada. Laakiin, siday u taagan tahay, ED way ka fog tahay dhimashada.
Suuqa suuqa ee Viagra waxaa loo isticmaalaa ragga da'da weyn ee caafimaadka saboolka ah, laakiin sida laga soo xigtay cilmi-baarisyada ugu dambeeyay ee 14 iyo 35% dhallinyaradu waxay la kulmaan ED. "Waa waali laakiin waa run," ayuu yiri Mary Sharpe Abaalmarinta Abaalmarinta, samafal waxbarasho oo diiradda saaraya jacaylka, jinsiga iyo internetka. "Ilaa 2002, dhacdooyinka ragga ee 40 ee ED waxay kudhowaad yihiin 2-3%. Tan iyo markii 2008, markii ay bilaashka aheyd, saan soodhawrka loo qoondeeyey ayaa si fudud loo heli karo, si joogta ah ayuu u kordhay. "Caddaymaha, bukaan socod eegtada iyo anecdotal, ayaa ku xiran in isticmaalka pornography uu yahay arrin muhiim ah.
Isticmaalidda ED iyo isticmaalka suuqyada
Clare Faulkner, oo ku takhasusay cilmi nafsiga iyo xidhiidhka ku salaysan xarunta dhexe ee London, ayaa ka mid ah kuwa ku xira ED iyo isticmaalka pornography. "Hadda waxaan haystaa ED macaamiishooda hore 20s," ayay tiri. Qayb ka mid ah dhibaatada ka muuqata sawir-gacmeedka "pornography" waa inay tahay "khibrad aad u kala fog. Xoog-saariddu waxay soo baxaysaa dibadda, taasoo ka dhigaysa mid aad u adag in aad jirkaaga ku jirtid. "Waxay sidoo kale sii wadi doontaa khuraafaadka, ayay tiri," ragga waa dhagax adag, haweenkuna waxay diyaar u yihiin jinsi kasta ".
Dhamaan dadka daawanayay filimada sawir qaadku waxay u egtahay in ay si buuxda u xakamaynayaan khibradooda galmoodkooda - taas oo mar kale, ayuu yiri Faulkner, "maaha mid lagu soo celiyo dunida dhabta ah". Inaad la kulanto qof bani'aadam ah oo dhab ah, baahi iyo amni darro, wuxuu noqon karaa mid si qoto dheer uga baxsan.
Munaasabadda online-ka ee loogu talagalay dhibaatooyinka cillad la'aanta ah ee loo yaqaan 'PIED', tobanaan kun oo dhalinyaro ah ayaa la wadaagaya dhibaatooyinkooda si ay u joojiyaan isticmaalka filimada sawirrada, horumarkooda ka soo jeeda jilicsan jilicsan iyo caqabadaha ay wajahayaan iyagoo sameeynaya nolosha dhabta ah ee jacaylka iyo jinsiga. Way adagtahay in la caddeeyo ficilku inuu keeno ED, laakiin markhaatiyaalkani waxay ku celinayaan natiijooyinka ka soo baxa suugaanta bukaan socod eegtada: in haddii ragga ay ku ciyaraan ciyaalkooda, waxay bilaabaan inay ka soo kabtaan awooddooda inay ku noqdaan hurdo nololeed dhab ah.
Qaar ka mid ah ragga dhalinyarada ah ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo taageero dhaqameed oo gaar ah, sida NoFap (gorgortanka "aan lahayn wax la qabadsiin"), oo ay asal ahaan ka soo jeedaan Alexander Rhodes. (Sharpe wuxuu eegaa in nimanka dhalinyarada ah ee hadda "ay la simanyihiin sawirro" Pornography "- uma arkaan iyaga si gaar ah".) Rhodes, hadda 31, ayaa bilaabay isticmaalka isticmaalka pornography internetka agagaarka 11 ama 12. "Waxaan ku jiray jiilkii kowaad ee dadka oo koray korukaca internetka xawaarihiisu sarreeyo," ayuu ku yiri doodii internetka ee dhawaan.
Waqtiga uu bilaabay inuu galmo ku sameeyo 19, wuxuu sii waday: "Ma ilaawi karin kacsanaan la'aan malaha malaha. Sanadkii hore, wuxuu u sheegay dhagaystayaasha dhageysiga Xarunta Qaranka ee Maraykanka ee ku saabsan Galmada Galmada: "Carruurta Maraykanka iyo kuwo badan oo caalamka soo kordhay ayaa la qabsaday iyada oo loo marayo waayo-aragnimo internetka ah oo lagu soo bandhigo fara-xumeyn waa mid khasab ah. "
Isticmaalayaasha Porn wuxuu bilaabaa dhalinyaro
Da'da yar ee uu Rhodes bilaabay inuu daawado filimada qaawan maahan wax aan caadi ahayn. Sannadkii 2016, Jaamacadda Middlesex waxay ogaatay, iyadoo 60% carruurta markii ugu horreysay ka daawadeen guryahooda. Iyo daraasad Irish ah oo la daabacay horraantii sanadkan ee joornaalka Porn Studies waxay ogaatay in 52% wiilasha ay bilaabeen inay isticmaalaan fara-xurunada si ay ugu raaxaystaan ​​da'da 13 ama hoos. Warbaahinta bulshada ayaa noqon karta albaab, ayuu yidhi Sharpe. "Xiddigaha Porno waxay leeyihiin xisaabaad Instagram ah si ay carruurtoodu u eegaan Instagram, iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxay dhihi doonaan: 'Fiiri fiidiyowgii ugu dambeeyay'. Hal ama labo fiidiyow oo aad eegto porno hardcore. Carruurta 12 ama 13 kuma fekeraan inay eegaan waxyaabo adag oo adag. "
Hay'adda Abaalmarinta Reward maaha urur ladagaalanka lidka ku ah, ayuu yidhi Sharpe, "laakiin porno xad-dhaaf ah ayaa isbeddelaysa sida carruurtu u noqotid jinsi." Waxayna ku dhacaan sanadooda qaabeysan, "marka ay da 'ahaan yihiin kuwa ugu nugul dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo mukhadaraadka. Inta badan xayawaanka iyo jirrooyinka maskaxda ayaa bilaabanaya markay qaan-gaaraan. "She iyo Faulkner waxay aaminsan yihiin in kororka isticmaalka pornography ay ugu yaraan sharxi karaan sababta Millenniyadu waxay leeyihiin jinsi ka yar jiilka ka hor, sida laga soo xigtay daraasad lagu daabacay wargeyska Archives of Behavior Behavior.
Waayo-aragnimada isticmaalka Porn-ka
Gabe Deem, oo ah aasaasaha kooxda soo kabashada Dib u soo noqoshada Nation, si furan ugala hadla khibradiisa. Markii uu ahaa 23, ayuu yiri: "Waxaan isku dayay inaan galmo la sameeyo gabadh qurux badan, naag aan aad u jeclahay, waxna ma dhicin. Anigu ma dareemayo wax kasta oo jimicsi jireed oo aanan helin wax yar oo ka mid ah kacsiga. "
Sida dadka kale, waxay yiraahdaan Faulkner: "Dadku waxay u baahan yihiin qiyaaso xooggan si ay u sarreeyaan. Marwalba marwalba way ka riixeysaa xuduudaha si aad u hesho farxad isku mid ah. Taas macnaheedu waa waxa ay daawanayaan waxay helayaan dhib badan iyo cabsi weyn. Markaan daraasadeydu waxay ii sheegaan inaanay ufududayn maaddada ay daawanayaan. "Marka cilmi-baarayaasha ay baranayaan maskaxda dadka isticmaala filimada jilicsan, Sharpe wuxuu yidhi:" Waxay arkayaan isbeddel maskaxeed oo isku mid ah oo ka dhexjira dhammaan waxyaabaha khatarta ah. "
Qaar ka mid ah ayaa weli sii daynaya kororka ED ee ragga dhallinyarada ah walaaca waxqabadkalaakiin Sharpe ayaa sheegeysa in ay dhici karto in laga yaabo in qaar ka mid ah "Waa maxay waxa aan ka maqalnay rugaha caafimaadka, dhakhaatiirta jinsiga, dhakhaatiirta iyo dadka wax ka qabta habdhaqanka galmada khasabka ah waa in ka badan 80% arimaha la xariirta porno." Waxay ahayd shaqaale aqoonyahanno ah oo ka shaqeeya UK oo waxay ku ogaadeen in dhakhaatiirta iyo farmashiyayaasha aysan xitaa tixgelineynin in ay weydiistaan ​​bukaanno dhalinyaro ah oo leh ED ee ku saabsan isticmaalka sarkooda. "Waxay iyaga siinayaan Viagra, taasina uma shaqeynayso qaar badan oo ka mid ah," ayuu yiri Sharpe. "Ma ahan wax ka qabashada dhibaatada jirta."
Marka daroogadu aysan shaqayn, Sharpe waxay maqashay in ragga dhalinyarada ah ee galmada gala (gogolka lagu geliyo guska si loo caawiyo ereyada). "Mid ka mid ah ka qaybgalayaasha caafimaadka mid ka mid ah aqoon-isweydaarsigeennu sannadkii hore ayaa sheegay in bukaanku lahaa laba maqaayadan oo kale ah." Qofna uma maleynin inuu isaga weydiisto isticmaalka suuqyada.
Dhamaan booqashadii dugsi ee dhowaan, Sharpe wuxuu soo xusuustaa, wiil dhalinyaro ah way waydiisay inta jeer ee maalintii maalintii ay xajistay in ay porno badan tahay. "Waxay isticmaalaan wakhti kasta," ayuu yiri Sharpe, "cidina u sheegin inay dhibaato tahay."
24 Febraayo 2019. Mary Sharpe waxay siisay faallo khabiir ku ah saxaafada saxaafada kiiskan aadka u murugada badan ee maxkamadaha Scottish-ka. Waxay ka nixisay umadda. Sheekada sidoo kale waxaa laga heli karaa The Sunday Post oo ah “"